Buyekeza: 'Inhliziyo ye-condor', nguFrancisco Núñez Roldán | Izincwadi Zamanje
Inhliziyo ye-condor (Ama-Altera editions) ixhumanisa izinhlekelele ezimbili ezinkulu ezazamazamisa iSpain neYurophu engxenyeni yokuqala yekhulu lama-XNUMX - iMpi Yombango yaseSpain neMpi Yezwe II-, futhi isiyisa ekuweni koDonga lwaseBerlin. Le noveli, elandiswe kumuntu wokuqala ngokubuka kwabantu ababili abebesezinhlangothini "zokulahlekelwa", yindaba esondelene kakhulu, engahlaziyi kuphela amaqiniso omlando, kepha futhi nemizwa yalabo abathintekayo, ezepolitiki ezahlukahlukene zase-Europe imibono, ukuvela nokuvuthwa komcabango.
Kule noveli ngu UFrancisco Núñez Roldán sithola umbono ngempi eyayiphilwa ngabantu ababili abadonswa phansi yizingxabano: intombazane eyaqhunyiswa ngamabhomu ngamaJalimane ngonyaka we-1937 nelinye lamasosha asemancane alahla lawo mabhomu. Ukuthi lezi zimpilo zihlangana kanjani intambo evamile yendaba ekhombisa imbudane impi enayo kulabo abayizwayo kanye nalabo abayilwa nayo, endabeni eveza imibono emibi kakhulu yezepolitiki, endabeni nayo ukhuluma ngoshintsho, ukuziphendukela kwemvelo, ukuphenduka, ukuqonda nokuthethelela.
Kunezinto eziningi engizithandile ngale ncwadi. Okokuqala, ngithanda ukugqamisa ifayela le- umbono okuxoxwa ngayo indaba. Umbhali usebenzisa isu elihehayo ngempela ngabalingiswa bakhe abaphambili nezinkanyezi, uKurt noRosario, abalandisa umbono wabo wendaba ngokwehlukana kumuntu wokuqala ngenye indlela, ngasikhathi sinye futhi ngokombono wabo, ku isimo sabo esithile, esingahlangene nakancane nabo baze bahlangane. Kepha abalingiswa abayikhulumi le ndaba sengathi yidayari. Umbhali akagcini ngokukhombisa ukuthi kwenzekani kubo, kodwa futhi nemicabango yabo, ukucabanga kwabo, ukukhathazeka kwabo, ukungabaza kwabo, abakucabangayo ngokudlula kwabo, abakulindele esikhathini esizayo, ingxoxo yabo yangaphakathi.
Ngithande kakhulu i- ukuvezwa kwendaba, eqala ekugcineni endaweni yokugcina, phakathi kokuwa kodonga lwaseBerlin, ukuze iqhubeke iye ekuqaleni kwayo yonke into, ukuqhunyiswa kwamabhomu okwenziwa yiCondor Legion, yebutho laseJalimane eJaén ngo-Ephreli 1. , 1937 Kusuka lapha, ngamunye wabalingisi abalandelayo balandisa ohambweni lwabo futhi akhombise isiphetho sabo kanye nesalabo ababazungezile ngezikhathi ezahlukahlukene ezibalulekile emlandweni waseSpain nasemlandweni waseYurophu, kanye nezikhathi ezibalulekile ngenkathi kuvuthwa izinhlamvu , abasitshela ngemibono yabo nangemicabango yabo yezepolitiki, kodwa futhi nangobudlelwano babo bomuntu siqu, ubulili babo, izifiso zabo nokukhungatheka kwabo.
Angikwazi ukwehluleka ukugcizelela indlela uNúñez Roldán axhuma ngayo, njengokungathi isingathekiso, iSpanishi romancero futhi i umlando we-Cid nawo wonke lo mlando, nokuthi uletha kanjani imisebenzi ebalulekile yezincwadi. Futhi angifuni ukukhohlwa ukugqamisa isikhubekiso uNúñez ahlasela ngaso sonke isenzo sezepolitiki noma umcabango, nokuthi uyakwazi kanjani ukuthola okubi kakhulu kunqubo ngayinye noma isiteji sayo, futhi hhayi kuphela emibonweni elahlekile, kodwa kuleyo ezibekiwe kanye nalezo ezavela kamuva futhi ezisasebenza nanamuhla.
Le ncwadi ingenze ngacabanga futhi ngacabanga ngezinto eziningi. Umlando wangasese wabaphikisi, indlela abaphila ngayo okwenzeke kubo futhi ikakhulukazi indlela ababhekana ngayo "nekhambi labo lokugcina" ingishukumisile.
Ngosuku engathatha ngalo le ncwadi, ngaxhunywa ngacabanga ngathi: "Ngizokudla lokhu ngemizuzwana emine." Kodwa kwakumele ahambe kancane. Njalo umzuzu, sonke isigcawu, yonke ingxenye yendaba ikuphoqa ukuthi ume. Kunemizwa eminingi nedatha ebengiyidinga ukuhamba kancane, ngigaye indaba, indaba engihambise emasontweni adlule. Kube yinto enhle ngempela. Angiqondile ukusho ukuthi ayikwazi ukufundwa "endizeni" ezinsukwini ezimbalwa, ukuthi ingafunda, kepha kufanele ukuthi uyifunde ngomoya ophansi.
Ungathanda ukuthi sikunikeze ikhophi ye- Inhliziyo ye-condor? Ngokuzithoba kuka-Ediciones Áltera, sizokunikeza ikhophi yale noveli emangalisayo kaFranciso Núñez Roldán.
Ukubamba iqhaza kulula kakhulu.
Okokuqala, kufanele ube ngumlandeli we-akhawunti ye-Twitter ye-Actualidad Literatura. Uma ungasilandeli, ungakwenza lokho usebenzisa inkinobho elandelayo.
Okwesibili, mane uthumele i-tweet usebenzisa i-hashtag #ALiteraturaCorazonCondor noma usebenzise inkinobho engezansi.
Umuntu ngamunye othumela i-tweet enjalo uzokwabelwa inombolo ekudonselweni phansi. Phakathi kwabo bonke ababambiqhaza sizokhetha inombolo yomnqobi ngokungahleliwe ngokusebenzisa ithuluzi elithi random.org
Umdwebo uzovulwa kuze kube uLwesithathu, Januwari 5, 2015, ngo-23: 59 ebusuku. Ngakusasa, Usuku lwamaKhosi Amathathu, sizodlala ngokulingana. Owinile wencwadi uzoshicilelwa kulokhu okuthunyelwe futhi sizoxhumana naye ukuze sikuthumelele ikhophi yamahhala yakwa-El corazón del Cóndor. Kubalulekile ukuthi owinile aphendule umlayezo wokuthi sizomthumelela ngasese nge-Twitter kungakapheli izinsuku eziyi-15 kuqedwe.
Ngaphezu kwalokho, kuyadingeka ukuthi amaphrofayili wababambiqhaza asesidlangalaleni ukuthi akwazi ukuhlola ama-tweets akho, uma kungenjalo ngeke abalelwe ukudonswa.
Ingabe ufuna ikhophi ye-El Corazón del Condor yakho noma njengesipho? Ungaphuthelwa bese ubamba iqhaza. Unenhlanhla!
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Buyekeza: 'Inhliziyo ye-condor', nguFrancisco Núñez Roldán
Futhi u ... ufunde izincwadi ezingaki?